User talk:HALVIN YAR - ဝီကီပီးဒီးယား
User talk:HALVIN YAR
မင်္ဂလာပါ HALVIN YAR။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဝီကီရဲ့ လမ်းစဉ်ငါးရပ်ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
ဝီကီဘယ်လိုစသုံးရမယ်ဆိုကိုတော့ တည်းဖြတ်နည်းစာမျက်နှာမှာကြည့်ပါ။ တည်းဖြတ်ခြင်းအကြောင်း နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီစာမျက်နှာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီစာမျက်နှာကို သုံးပြီး စာမျက်နှာတည်းဖြတ်မှုကို စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် ။
Ninja✮Strikers «☎» ၀၉:၁၆၊ ၃ ဇွန် ၂၀၁၆ (UTC)
မင်္ဂလာပါ! ကျွန်တော်က Ninjastrikers ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ် မကြာမီက ကွယ်လွန်ခဲ့သူ) နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို မိုးဟေကို ဆောင်းပါးတွင် သင်တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်ခဲ့တာကို ကျွန်တော် သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ချက်မှာ ခိုင်လုံတဲ့ ကိုးကားချက် မပေးထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားဟာ သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်း ရေးသားရာမှာ တင်းကျပ်တဲ့ မူဝါဒများ ချမှတ်ထားတဲ့အတွက် အဆိုပါဆောင်းပါးများဟာ တိကျရှင်းလင်းနေစေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပေးပါ။ အကယ်၍ ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်တာ မှားယွင်းတယ်လို့ ယူဆပါက၊ သို့မဟုတ် မေးခွန်းမေးမြန်းလိုပါက ကျွန်တော့ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမှာ စာတိုချန်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကျေဇူးတင်ပါတယ်! Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၃၆၊ ၅ ဇွန် ၂၀၁၆ (UTC)
19ပါခုႏွစ္ကမွားယြင္းေနပါတယ္.ဝီကီကိုေသခ်ာေတာ့မသံုးတတ္ေသးပါဘူးခုႏွစ္မွားယြင္းေနပါတယ္လို႔ေတာ့ေျပာခ်င္ပါတယ္က်န္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းထပ္မံျဖည့္စြက္ေစခ်င္ပါတယ္.လိုအပ္တာသိခ်င္တာမွန္သမွ်ကြၽန္ေတာ္ကိုေမးပါ.မိုးေဟကိုအေၾကာင္းအေသးစိတ္အကုန္သိသူတစ္ေယာက္ပါ.ပတ္သတ္သူတစ္ေယာက္ဘာ.အာ့ေၾကာင့္ျပည့္ျပည့္စံုစံုထပ္မံေဖာ္ျပေစလိုပတယ္.ျမန္မာဝီကီသာမကenglish wiki တြင္လည္းထပ္မံေဖာ္ျပေစလိုပါတယ္.ကြၽန္ေတာ္မလုပ္တတ္ဘာမသံုးတတ္ေသးဘာ.အကူအည္ီိေတာင္းပါတယ္သိလိုတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားအားေမးႏိုင္ပါတယ္မိုးနဲ႔ပတ္သတ္သမွ်ကို.ေက်းဇူးဘာ HALVIN YAR (ဆွေးနွေး) ၀၅:၅၅၊ ၅ ဇွန် ၂၀၁၆ (UTC)
ဝီကီပီးဒီးယားအသုံးပြုပုံ အကျဉ်းချုပ် လေ့လာနိုင်ဖို့ Wikipedia:သင်ခန်းစာများ ကို ဖတ်ရှုပါ။ ဝီကီဆောင်းပါးတစ်ခု ရေးသားခြင်းကို လေ့လာနိုင်ဖို့ Wikipedia:သင်၏ ပထမဆုံးဆောင်းပါး စာမျက်နှာကို ဖတ်ရှုပေးပါ။ အကူအညီလိုအပ်ပါက Wikipedia:လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ ပါဝင်ရေးသားခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၆:၁၀၊ ၅ ဇွန် ၂၀၁၆ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=User_talk:HALVIN_YAR&oldid=432319" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၂၃:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။